दिदी के पैसाकै लागि मात्र हो त हजुरले गीत गाउने, बिष्णु माझिलाइ खुल्ला पत्र (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
दिदी के पैसाकै लागि मात्र हो त हजुरले गीत गाउने, बिष्णु माझिलाइ खुल्ला पत्र (भिडियो सहित)
July 29, 2017	940 Views
सर्वप्रथम त म हजुरलाई दिदि भनेर सम्बोधन गर्ने अनुमती माग्छु । जव म गित संगित बुझ्ने भए तोते बोलीमा गित गुन्गुनाउन सक्ने भए तव देखि तपाईको आवाजलाई सुन्दै गुन्गुनाउने गर्थे आज पनि सो क्रम रोकिएको छैन् । वचपनामा दिमागमा छिरेको आवाज भएर होला आज सम्म पनि निस्किेको छैन् । निस्कियोस पो कसरी तपाइको आवाजमा जादु छ मोहोनी छ । रेडियोमा गित सुन्ने चलनबाट टेलिभिजनमा पुग्यो टेलिभिजन बाट अहिले यु–ट्युब सम्म आइपुग्यो । रेडियो बाट टेलिभिजन हुदै यु–ट्युबको प्रचलन आइपुग्दा सम्म पनि तपाईको आवाज सुन्न र तपाइको बारेमा वुझ्न छाडेकी छैन छाडु पो कसरी दिदी तपाइ त मेरो सबै भन्दा मन पर्ने गायिका अंग्रेजीमा भन्ने गेरेको डाइ हार्ट फ्यान हु तपाइको । गर्व लाग्छ दिदि कि तपाई जस्तो अतुलनिय गायन क्षमता भएकी गायिका नेपाली गितसंगितले पाएको छ । हामी नेपालीले पाएकी छु । तर विडम्बना यो छ की तपाइ जस्तो गायिका यो देशले पाइ रहँदा जती धेरै गर्व लाग्छ त्यसको सयौ गुणा मन निरास हुन्छ कि यो देशका चर्चित गायिका जस्को म डाइ हार्ट फ्यान हुँ उहाँको एउटा पुरानो तस्बिर बाहेक अरु केही देख्न पाएकी छैन । कसलाई रहर नहोला र आफुलाई सबै भन्दा मन पर्ने गायिका संग भेट्ने रहर उँहाको बारेमा केही कुराहरु जान्ने रहर ,अन्य गायक गायिकाहरुलाई जसरी विभिन्न कार्यक्रममा, मिडियामा, मेलामहोत्सवमा र देश विदेशमा घुमेको देख्ने रहर, हो दिदि मलाई पनि रहर छ कि आफुलाई सबै भन्दा मनपर्ने गायिकालाई अरु जस्तै दुनियाले देखुन मलाइ पनि रहर छ दिदि तपाई संग सेल्फी लिएर विद माइ फेवरेट सिंगर भन्दै फेसवुकमा फोटो राख्ने रहर तर यो रहर मनमा मात्र सिमित भएको छ । सबैको मन जितेर पनि किन आफ्नै मन संग हार्नु भयो दिदि?? सारा संसारलाई आफ्नो प्रतिभा चिनाएर आफु किन लुक्नु भयो दिदी ?? तपाइले त सिंगो गित संगितको क्षेत्रलाई नै कहिले कसैले दिन नसक्ने योगदान दिनु भएको छ । सिंगो लोक गित संगितको क्षेत्रलाई नै उदयमान बनाएर आफै किन विलिन हुनु भयो दिदि ?? साँच्चै मन रुन्छ दिदि तपाइको सुमधुर आवाज भरिएको प्रत्येक गित सुन्दा मेरो मन भक्कानिएर आउछ दिदि जति पटक तपाईको गित सुन्छु त्यती नै धेरै तपाइलाई भेट्ने र तपाइलाई अन्य गायक गायिकाहरु जस्तै खुलेर बाहिर निस्केको हेर्ने चाहाना बढेर आउँछ । अनि मनमा अनेकौँ प्रश्नहरु उब्जिन्छन् । किन दिदि यसरी लुकेर बस्नु भाको ?? के तपाइलाई रहर छैन आफ्ना दर्शक श्रोताहरु संग आमुनेसामुने भएर गित गाउन ?? के तपाइलाई लाग्दैन कि तपाइका लाखौ फ्यानहरु तपाइलाई एकपटक हेर्नका लागि कति तड्पिए होलान ? के तपाईले पैसा कै लागि मात्र गित गाउनु भएको होत ? सुनेको छु विहे मात्र भएको हैन सन्तान पनि जन्माई सक्नु भयो रे तपाईको यहि अवस्था रहि रयो भने के भोली ति सन्तानले गर्व गर्न पाउलान त तपाईले गित संगितको क्षेत्रमा दिएको योगदानको ? संसार एक्काइसौ सताव्दीमा पुगि सक्यो अहिले जति नै टाढा भएपनि हेर्न बोल्न सम्पर्क गर्न पाउँछ यस्तो युगमा पनि तपाई लुकेर कसरी बस्न सक्नु भएको छ ??
लाखौ, करोडौ फ्यानहरु भएकी गायिका यसरी एउटा कुनामा बसेर पर्दाले मुहार छोपेर गित गाउदा र गाए वापद अन्य कलाकारहरुले भन्दा बढी रकम पाएकोमा मात्र तपाइ खुसी हुनुहुन्छ ?? तपाई आफ्नै खुसीले यो सव गर्दै हुनुहुन्छ कि अरु कसैको लागि ?? तपाई देशको चर्चित गायिका भएको नाताले पनि म जस्ता लाखौ दर्शक श्रोताहरुको मनमा यस्ता प्रश्नहरु उठ्नु स्वभाविक नै हो । तपाई आफ्नो पारिवारिक कारणले गर्दा यो स्थितीमा हुनुहुन्छ की आफ्नै खुसीले ?? कारण जे भएपनि बिन्ती छ दिदि एकपटक मिडियामा आएर थोरे बोलिदिनुहोला म जस्ता लाखौ फ्यानहरु तपाईको पखाईमा छन् दिदि । बिन्ती एकपटक मिडिया आइदिनु । हुनत तपाईलाई अलि बढी नै माया गर्ने मान्छे भएर होला थोरै भाबुक हुन पुगे त्यसैले अलि बढी बोल्न पुगे तर मत तपाईको डाइहार्ट फ्यान हुँ दिदि के तपाईको बारेमा यति बोल्ने अधिकार छैन र मलाई??
तपाइकी डाइहार्ट फ्यान ,रुपा सुनार